QIIMO-DHAC: Arsenal Oo Dooneysa In Mesut Ozil Ay Ku Beddesho Laacib Ka Ciyaara Latin America – Cadalool.com
QIIMO-DHAC: Arsenal Oo Dooneysa In Mesut Ozil Ay Ku Beddesho Laacib Ka Ciyaara Latin America
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa qorshaynaysa in xagaaga ay ka takhalusto xiddigeeda Mezut Ozil oo uu tababare Unai Emery u diiday fursad iyo boos joogto, waxaana booskiisa iman doona laacib ka ciyaara qaaradda Latin America.
Arsenal ayaa bartilmaameedsan doonta kubbad-sameeyaha kooxda River Plate ee Juan Quintero oo loo gelin doona funaanadda Mesut Ozil xili ciyaareedka dambe sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa waddanka Spain.
Sida uu wargeysku sheegay, Gunners waxay mar horeba go’aansaday inay albaabada ka furto Ozil oo ay ka saarto liiskeeda marka uu suuqu furmo.
Warku waxa kale oo uu sheegay in Arsenal ay diiraddu u saaran tahay James Rodriguez oo dhamaadka xili ciyaareedkan kusoo laaban doona Real Madrid marka uu soo dhamaysto laba xili ciyaareed oo amaah ah oo uu Bayern Munich ugu ciyaarayey, taas oo la filayo inaanay fulin doonin dookheedii labaad ee ahaa inay si rasmi ah ula wareegi karto.
Don Balon waxa uu xusay in Juan Quintero oo u dhashay waddanka Colombia, in River Plate ay ku iibinayso lacag dhan €22 milyan oo Euro, kaas oo hore uga codsaday kooxdiisa in la dhegaysto dalabyada uga imanaya qaaradda Yurub.
26 jirkan oo ka mid ahaa xulkii qaranka Colombia ee ka qayb-galay Koobkii Adduunka, ayaa waxa uu River Plate ka caawiyey inay ku guuleysto tartanka Copa Libertadores oo finalkii lagu ciyaaray magaalada Madrid, kaddib markii rabshado ay booliska Argentina xakamayn kari waayeen rabshadaha taageereyaasha Boca Juniors iyo River Plate.